Tetezamita: Nahoana no tsy hahazo fanampiana?
2009-08-21 @ 11:15 in Politika
Efa elalela tokoa no tsy namaham-bolongana araka ny tokony ho izy. Tsy lany resaka velively fa tsy te-hampisy fifandirana amin'ny fitadiavam- bahaolana hikatsahana ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Nisy lahatsoratra eo andalam-pamitana saingy tsy notohizana na navoaka fa miandry ny tohin'ny toe-draharaha. Mihetsiketsika fatratra ny ankolafy Andry Rajoelina mba hitazonany ny seza efa azony amin'izao fotoana izao. Sady te-hitazona ny filohan'ny tetezamita no te-hitana ihany koa ny praiminisitra, sarotra dia sarotra anefa izany tinady izany raha mbola hifanaraka ihany koa. Tsy lazaina intsony ny hoe matoa nitady ny fifanarahana ka nanasonia ny Maputo I dia nitady ahaolana araka izay azo atao hampandeha ny tetezamita, tsy maintsy mitelina ny fitakian'ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Raha nihevi-tena fa hahatantana samirery ny tetezamita manko tsy niditra velively tamin'izay fifanarahana na inona izany na inona. Rehefa tafiditra anefa dia sarotra ny miala satria vavolombelona manara-maso ny iraisam-pirenena.
Fa naninona ary no nanaiky hifanaraka e?
Tsy te-hanoratra lava aho fa hampitodika ny saina amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy ho variana mijery ny foitran'ny tena eto Madagasikara fotsiny. Nanana ny lazany tamin'ny fotoan'androny fa izay mpitondra any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana nahazo fahefana dia miezaka hatrany hanatevina ny fiarovana ny sezany. Vokatr'izany, lasa any amin'ny fividianana fitaovam-piadiana hatrany ny ampahany betsaka amin'ny tetibola ary dia tavela hatrany ny fampandrosoana sy ny fotodrafitr'asam-pampandrosoana. Ohatra amin'izany, teto Madagasikara nandritra ny tolona tamin'ny 1991 ireny, mbola nikafiry ny nijanona tao amin'ny lapan'Iavoloha ny filoha Ratsiraka tamin'izay fotoana izay. NIsy ny resaka an-jorony teo amin'ny samy olona. Nisy nanontany ity manamboninahitra iray hoe maninona raha tafihina ao ilay rangahy io? novaliany fa angamba roa ora ihany raha be ny fifampitifirana dia ho lany bala ny miaramila mpanafika. Nahoana? Tany Iavoloha avokoa ny ankamaroan'ny fitehirizana ny bala sy ny fitaovam-piadiana fa ambiny kely ihany ny any amin'ny toby hafa. Izany hoe ny misahana ny fiarovana ny filoham-pirenena no tena ary fitaovana sy voaomana amin'ny zavatra rehetra.
Tsikaritry ny firenena mba te-hanampy ihany izany toe-javatra izany ka notadiaviny ny fomba hampihenana ny fandaniana amin'ny fiarovana sy ny fitaovam-piadiana ka ny teo amin'ny fomba fanomezana fanampiana no nametrahany fepetra. Mba handefasana ny tetibola any amin'ny fampandrosoana dia tsy eken'izy ireo raha ny fanomezana ataon'izy ireo no hividianana fitaovam-piadiana. Ho takalon'izay kosa, satria eo ihany ny ahiahy amin'ny hisian'ny fanonganam-panjakana, dia mifanaraka ny firenena maro fa tsy omena fanampiana mihitsy izay firenena itrangana fiovana mpitondra tsy amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sy tsy misy hosoka, indrindra indrindra fa ny tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana mitam-piadiana.
Tsy mahagaga raha tsikaritry ny ankolafy Rajoelina fa tsy misy fanohanana ny fitondran'izy ireo mihitsy avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena na hilaza fahazato faharivo eo aza izy fa izay no safidin'ny vahoaka malagasy rehefa tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sy tsy misy hosoka no nahazoanao ny fahefana. Mazava loatra ihany koa fa ny any amin'ny fikarakarana ny fifidianana ihany no hanampian-dry zareo ny fitondrana tetezamita iraisan'ny rehetra (mba fifanarahana ankolafy lehibe eto amin'ny firenena), ary tsy tokony hisy resaka fampandrosoana na fitokanana zavabita izany mandritra ny tetezamita fa tokony hiompana amin'ny fanomanana ny fifidianana ihany izany.
Noho izany raha mihevitra ny hahavita samirery ny famitana ny tetezamita ny ankolafy Rajoelina dia tsy mila manaja ny fifanarahan'i Maputo ary tsy mila mankany akory aza, fa raha mihevitra fa tsy mety ity raharaha ity raha tsy iaraha-mitondra sy ialàna amin'ny fifoteran'ny hatezeram-bahoaka ny ankolafy Rajoelina dia tsy maintsy mandefitra dia mandefitra na mihevi-tena ho manana hery sy ny fitaovam-piadiana aza.
Resaka hafa madinika: Milaza ho mampanao fifaninanana hiofana ho manamboninahitra tsy nanana asa afa-tsy ny nanongam-panjakana indray ny Akademia Miaramila ao Antsirabe, rehefa hitan'ny filoha Ravalomanana tamin'ny androny fa toa vava mihinana fotsiny no ilàna an-dry zalahy ireto sady efa tsy tsiambaratelo intsony ny fahalalàna fa ny zanaka manamboninahitra ambony ihany no voalohan-daharana tafiditra ao. Antony iray nahatezitra ny miaramila koa iny fanapahan-kevitry ny filoha tsy hampiditra miaramila manamboninahitra iny intsony. Mbola ampiana isa indray ve ireto kolonely efa an-jatony fanadiam-bola fotsiny ho an'ny firenena ireto? Tena maika ny hampiditra ny havany hitavan-karama mihitsy ry zalahy mpanogam-panjakana hitazonany ny hery sy ny fiadiana hiarovany ny sezany sy ny tombotsoany tsy azo tsikeraina e!
jentilisa, zoma 21 aogositra 2009 amin'ny 13: 17